Ibinzana elithi "Nguwe okutyayo" akusiyo ibinzana elingenanto! Ngokutya okunempilo kunye neeprobiotics ezinokunceda, unokuphepha ezininzi izifo kwaye uhlale ubutsha kwiminyaka ezayo.
Ingcamango "yokutya okunomsoco" yazalwa kuma-80 aseJapan, apho ikhowudi yehlabathi yokutya okunempilo yamukelwa kwi-congress yesayensi. Ukubonakaliswa: ukutya okunokulinganisela kunempembelelo enempilo emzimbeni, nokuba ingakhuselekanga okanye i-homeostasis-ibhalansi yangaphakathi.
I-ode kwi yogurt
Iimpawu zokuqala ezibalulekileyo kwisondlo esilungileyo kunye nama-probiotic ancedo, ukwenza umsebenzi we "broom" emzimbeni, ngokwemibutho yaseJapan, i-muesli, i-bran ye-cereal, i-oats, izityalo ezingekho ubisi.
Iprobiotic iimveliso zobisi ezinomuncu waba ngowona wesibini umthombo wokutya obaluleke kakhulu kunye neprobiotic eziwusizo. Imveliso yobisi e-Lactobacillus-efakwe ngotywala ibizwa ngokuba yi-pigs omuncu ubisi, obusoloko bugcina ubuncinci bezinga leempembelelo kwi-system digestive yomzimba.
Icandelo lesithathu eligunyazisiweyo lokutya okunomsoco kunye neprobiotiki ezincedo ziyimveliso equkethe i-probiotiki (iindawo eziphilayo zentsholongwane enenzuzo yebhaktheriya kunye nesibungulu sesinambu). Icandelo lesihlanu eligunyazisiweyo lokutya okunempilo yizipho zolwandle kunye nemifula (i-crabs, squid, caviar, i-salmon, i-herring, i-salmon e-pinki, i-sardines, i-cod kunye ne-pollock). Bandakanya nabo ekudleni kwakho kufuneka kube okungenani ezimbini ngeveki.
Ngokwenene ukutya okunempilo kunye neprobiotic ezincedo kuthetha "into yokuphila". Kubalulekile ukuqonda ukuba ukutya okunesondlo kunye namayeza okuxhamla kunye nezinye izidlo ze-probiotic akuyiyo yonyango. Abayiphilisi, umsebenzi wabo oyintloko kukuthintela iziphumo ezimbi kumzimba wezinto eziphilayo, uxinzelelo kunye nezinye izinto ezimbi. Ngendlela, kwamanye amazwe i-theory yokutya okunomsoco yayincinane, yanda, ngokwandiswa kweziganeko zelizwe. Ngoko, eFransi kwaxhaswa nge-asparagus, i-artichokes kunye newayini elibomvu. Kodwa iimveliso zobisi ezinomuncu obuninzi kunye neendawo ezibonakalayo ezintle ziqhubeka zihlala ezikhundleni eziphambili kwisondlo esifanelekileyo kwihlabathi.
Konke ngo Mechnikov
Ndiyabulela ukufunyanwa kukaMechnikov kwintsimi ye-microbiology yokutya okunomsoco kunye neprobiotics ezinokuthi zaqala ukusetyenziswa kwimveliso yemveliso yobisi.
Ukuba usebenzisa i-wand yaseBulgaria kunye ne-thermophilic streptococcus yegwele, ufumana i-yogurt, kwaye ukuba i-kefir fungus i-kefir. Isayensi iye yaqhubeka, ngoku, ngaphandle kweenkcubeko zokuqala, ezinye iimveliso eziqingqiweyo ezisebenzayo kunye neerbibioti zongeza iintlobo ezinobuncwane beprobiotic. Into ephambili xa ukhetha umkhiqizo, qiniseka ukuba iinzuzo zayo zibonakaliswa ngophando lwezesayensi kunye neklinikhi.
Inzuzo efunyenwe ngokwesayensi
Edibeneyo kwimveliso yobisi kunye neprobiotics, i-bifidobacteria ephilayo i-ActiRegularis iyakwazi ukusombulula iingxaki ezithile. Ngokusetyenziswa kwabo kwimihla ngemihla, inkqubo yokugaya igxila. Oku kubaluleke kakhulu kubantu abajongene nokuqothulwa. Ukutya okunomsoco kunye neeprobiotics ezinokunceda zidlala indima ephambili kwinkqubo yokugaya abantu.
Ukomeleza umkhuhlane , iimveliso ezicetyiswayo nge-probiotic strain Lactobacillus casei i-Imunitass, ukunciphisa iziganeko kunye nobunzima beentsholongwane zokuphefumula kunye nezifo ezithintekayo. Iimveliso zobisi be-milk and probiotics ezine-bifidobacteria eziphilayo - isibambiso sobutsha nobuhle! Ukutya okunempilo kukuyinxalenye yobomi bethu, ngoko ke wonke umntu kufuneka adle amavithamini namaminerali. Ukugcina impilo esemncinci kuthetha ukuguga kunye neqhayiya kunye namandla onke. Ngoko ke, umele uqinise umzimba wakho nazo zonke iintlobo zendlela kule nto kwaye ngokukhawuleza awuyi kuyidinga i-antibiotiki xa kunobanda.
I-White Slimming Tea
Indlela yokutya ngokufanelekileyo kwi-diabetes mellitus
Ubisi ukusela kuyingozi? Ngubani ocinga ukuba ...
Indlela yokutya ngokufanelekileyo ukuze ube nempilo?
Yintoni eluncedo kwieshizi?
Iibisiki kunye nama-raspberries kunye ne-oatmeal
Indlela yokulungiselela ukuzalwa komntwana - ebaluleke kakhulu ekuqalekeni kobomi obonwabileyo
Ikhekhe lokugcoba ngobisi olunamanzi
Izifo zesibhinqa, izifo zesini
Ukungabi nesinyithi emzimbeni womntu
Njengoko abantu bacacisa ukuba le ntombazana ayifuni
Ukunyangwa kweemeteorology ngamanyathelo omntu
AmaSandwich ngeengulube eVietnam
Iimpawu zasemanqamleza zonyango lwe-antibiotics: inzuzo okanye inzakalo
Burgers kwi-salmon kunye ne-rosemary